Lafta Gareen oo gaarey Dhuusamareeb | Keydmedia
Lafta Gareen oo gaarey Dhuusamareeb
Waa Madaxweynihii ugu horeeyay, oo ka socda Maamul Goboleedyada oo ka degay Dhuusamareeb, iyadoo la filayo in saacadaha oo aadan wafdiga Farmaajo halkaasi gaaro.
Wafdi uu hogaaminayo Madaxweynaha Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, C/casiis Lafa Gareen ayaa ka degay magaaladda Dhuusamareeb, ee xarunta Galmudug halkaasoo la filayo inuu ka furmo wareegga 3aad ee wadahadallada DF iyo Dowlad Goboleedyada.
"Waxaan Nabad tagay Magaalada Dhuus-Mareeb ee caasimada dowlad goboleedka Galmudug , halkaas oo aan uga qeyb galaayo Shirka DFS iyo Dowladaha Xubnaha ka ah DFS ee lagu balansanaa," ayuu ku yiri Lafta Gareen qoraalka bartiisa Twitter-ka soo geliyay.
Lama oga waqti uu furmi doono shirka, oo ahayd inuu maanta billowdo balse u baaqday cilado farsamo iyo khilaaf cusub oo dhinacyada soo kala dhexgalay.
Kala soco wararka Shirka Dhuusamareeb bogga Keydmedia Online.